Waxaan weli ku guda jirnaa sirtii aan ka helnay gumaysiga. Qaybtan 5aad waxaan ku soo qaadan doonaa sida uu gumaysiga uga argagaxsan yahay guud ahaan dhaq-dhaqaaqa jaaliyadaha ay wadaan iyo qorshaha uu u dajiyay inuu kula dagaalamo xubnaha firfircoon ee jaaliyadaha.
Dareenkaa uu gumaysiga ka qaaday halganka ay ku jiraan jaaliyadaha oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwii burburin lahaa Itobiya wuxuu ugu talgalay miisaaniyad xoogan sida aad ku arki doontaan qorshaha uu dajiyay cadawga, waxaana loo qoondeeyay inay iska kaashaadaan hay’ado kala duwan oo qaarkood loogu talagay inay gacanta ka hadlaan oo siday sheegeen dhabarka ka jabiyaan kuwa ka soo horjeeda dawladda. Waxay sheegeen inay arintaa soo ogaatay;
Maqaalkan xiisaha leh iyo kuwii ka horeeyayba ;